?Waan soo dhawyneynaa go?aamadii kasoo baxey shirkii Neyroobi? Afhayeenka isimada Puntland Garaad C/laahi Cali Ciid. – Radio Daljir
?Waan soo dhawyneynaa go?aamadii kasoo baxey shirkii Neyroobi? Afhayeenka isimada Puntland Garaad C/laahi Cali Ciid.
Afhayeenka isimada Puntland Garaad C/laahi Cali Ciid ayaa ka hadley markii ugu horeysey qodobadii kasoo baxey shirkii golaha ammaanka ee Neyrobi kusoo xirmey, waxaana uu sheegey in qodobadaasi ay siweyn u soo dhaweeyeen odoyaasha Puntland.
Garaadka ayaa sidoo kale QM ku eedeeyay iney baal martey waxgaradka iyo odoyaasha Soomaaliyeed, oo uu ku sheegey inaan yihiin kuwa kaliya ee talada dalka iyo xal u helidiisa wax laga-weydiiyo, waxaana uu intaasi ku darey Garaadku shirka lasheegey inuu Muqdisho ka dhacayo inuu yahay mid waqtigiisuna gaabanyahay wadatashigiisana lagu dagdagey, iyadoo uu tilmaamey shirkaasi iney ahayd inuu ka dhaco deegaanada Puntland.
Garaadka ayaa ka Hadley dhinaca kale balan-qaadkii la sheegey in loo sameeyay gudoonka baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Shiikh Aadan, waxaana uu tilmaamey inuusan hogaamiye qaran noqon Karin,
Afhayeenka isimada Puntland Garaad C/laahi Cali Ciid ayaa dhinaca kale waxaa uu walaac xoogan uu ka muujiyay doorka waxagaradka Soomaaliyeed oo la baalmarey, isla markaana intabadan aan mudooyinkaan lagu casumin shirarka watashiga ah ee QM qabaneyso, waxaana uu tilmaamey hadii odoyaasha doorkooda lasiiyo in taladu halkaasi ka dhawdahay